Madaxtooyada K/Galbeed oo beenisay qoraal looga faafiyay baraha bulshada - Caasimada Online
Home Warar Madaxtooyada K/Galbeed oo beenisay qoraal looga faafiyay baraha bulshada
Baydhaba (Caasimadda Online) – Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa beenisay warqad lagu faafiyay baraha bulshada oo la sheegay iney soo saareen kuna saabsan arrimaha doorashada.
Warqadda la faafiyay waxey qireysaa in madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen uu diiday inuu qabto doorasho aan heshiis lagu aheyn, waxaana lagu sheegay in maamulka uu ka laabtay go’aankii uu markii hore dowladda la gaaray.
Madaxtooyada waxey soo saartay war qoraal ah oo arintaas ku saabsan, waxeyna beenisay in warqadda baraha bulshada la isla dhexmarayo ay tahay mid been abuur ah.
Arintaan waxey ka dhigan tahay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay qaban doonaan doorashada xubnaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
Warqadaan ayey dadka kusoo aadiyeen iyadoo shalay ay magaalada Bayhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka ay ku kulmeen ergayga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan iyo madaxweyne C/Casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen).
WARQADDA LA BEENIYAY HALKAAN HOOSE KA AKHRISO: